Cristiano Ronaldo ayaa sida cad taageero u ah qaab ciyaareedkii ugu danbeeyay ee uu Bruno Fernandes u soo bandhigay Manchester United iyagoo xaqiijistay guul ay ka gaareen kooxda Istanbul Basakshir koobka Champions League xalay oo Talaado aheyd.
Xiddiga reer Portugal ayaa dhaliyay gool qurux badan oo uu ku furay goolashii Old Trafford ka hor inta uusan dhalinin goolkiisa labaad daqiiqadii 19aad ee ciyaarta.
Fernandes ayaa ka dib iska daayay fursad uu seddexleydiisii ugu horeysay ku dhalin lahaa isagoo rigoore kooxda loo dhigay ku wareejiyay Marcus Rahsford kaasoo hogaanka United seddex gool ka dhigay ka hor inta uusan Daniel James dhameystirin guusha oo aheyd 4-1.
Ronaldo ayaa isna ciyaarayay xalay isagoo shabaqa soo taabtay kulankii ay Juventus 2-1 kaga badisay kooxda Ferencvaros. Waxayna u muuqataa in 35 jirkaan uu la socdo waxa uu Bruno Fernandes ka sameynayo kooxdiisa hore isagoo “Like” saaray sawir uu Bruno Fernandes oo dhigay Instagram oo uu ugu dabaaldegayay mid ka mid ah goolashiisa.
Kabtanka Portugal ma ahan nin looga bartay inuu “Like” saaro ama faalo ka bixiyo sawirada iyo muuqaalada ay ciyaartoyda kale soo dhigaan baraha bulshada, taasoo ka dhigan in Fernandes uu helay mudnaan gaar ah.
Xagaagii la soo dhaafay, Fernandes ayaa kashifay sida uu ugala tashtay Ronaldo ku biiritiisa Manchester United bishii Janaayo ee sannadkan.